Deg deg: Meydka Somali laga helay kaniisad ku taal Jigjiga - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Deg deg: Meydka Somali laga helay kaniisad ku taal Jigjiga
Meydka Somali laga helay kaniisad ku taal Jigjiga kadib rabshadihii iyo bililqadii la socotey ee ka dhacay sabtidii ina soo dhaaftey. Meydkan Somalida ah ayaa la sheegay inay gaarayaan ilaa sideed si xun loo jarjaray jirkooda.
Dadka ayaa sheegay in dadkaan loo malaynayo inay dileen Oromo ama ciidankii soo galay magaalada. Dadkan ayaa ku xeraysnaa kaniisad iyo xero ciidan oo ismaamulku.
Wararka ayaa sheegaya in dadkaan laga qabtey magaalada laguna xereeyay kaniisada iyo xerada ciidan. Lama garan karo inay shacab yihiin iyo inay maamulka u shaqaynayeen.
Waxa meydkaan helay ciidanka Liyuu booliiska ee dawlad deegaanka. Waa dhimashadii ugu badneyd ee timaada kadib markii ciidan uu soo direy Abiy Axmed si uu u joojiyo shir ka dhici lahaa Jigjiga oo madaxweynaha deegaanku qabanayay.
Aduunka ayaa walaac ka muujiyay xaalada Jigjiga maalmihii la soo dhaafay iyo iscunka sii kordhaya ee u dhexeeya qowmiyadaha Oromada iyo Somalida oo u badan aargoosi.
Xaalada magaalada Jigjiga iyo Diridhaba maanta:
Jigjiga ayaa maanta degan waxana dib loo furey goobaha ganacsi ayadoo dib u dhis lagu bilaabay goobihii ay waxyeelaysay rabshadaha. Waxa lagu diley dad ka soo jeeda qomiyadaha kale ee Itoobiya sida Oromada iyo Xabashida.
Gobolka Tigreey oo xiriir gaara la leh Cabdi Maxamuud Cumar ayaa iyagu walaac ka muujiyay sheegayna in sharciga la baalmaray. Tigreega ayaa raba inay goostaan.
Welli madaxda Somalida ayaa ka gabanaya inay fagaaraha u soo baxaan sababo amni awgeed, waxana go’an isgaarsiinta internet-ka.
Magaalada ayaan welli si fiican loo baarin maadaama ay ka soo kabanayso qalqalka ay keeneen dadkii bililiqada ku bilaabay. Weyna dhici kartaa in la helo meydad kale.
Dhacdada Jigjiga oo loo rogey mid Oromo iyo Somali u dhaxaysa ayaa ku faaftey Diridhaba oo Oromadu ku gubeen qoys Somali oo haween iyo caruur ku jirto.
Somalida qaar ayaa ka qaxay xaafadaha Diridhaba ay ka degan yihiin ee Oromadu ku badan tahay. Rabshadaha Diridhaba ayaa laga baqayaa inay faraha ka sii baxaan. Dhimashada qoysaska Somalida ah ayaan la tirinin ama kuwa laga dhacay ganacsigooda.